ကိုယျဝနျရမှာလား | OnDoctor
By Dr. Pyae Shin	 On Jul 14, 2018 Last updated Jul 14, 2018
ဟူသောမေးခွန်းသည် OnDoctor ရဲ့ပရိသတ် လူငယ်များ အမေးများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝတရားရဲလှု့ဆော်မူကြောင့် အမှားတစ်ခုနယ်ကျွံမူကြောင့် ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်နေသူများအတွက် အားကိုးတကြီးမေးခွန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်ဟု ယူဆူအဖြေပေးသောအခါ နောက်ဆက်တွဲ ရလာလျှင်မလိုချင်ရ်ျ ကူညီပါဟုလည်းမေးတတ်ကြပါတယ်။မလိုလားအပ်သောအပြုအမူပြုလုပ်လျှင်လည်း ဆိုးကျိုးများတတ်သည်ကိုလည်းရှင်းပြသည်ကို လက်မခံနိုင်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။မိမိရဲ့ချစ်သူ ပြောစကားကိုယုံစားရ်ျ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသောအဖြစ်သို့ရောက်မည်ကို မိန်းကလေးများအထူးသတိထားရှောင်ရှားနိုင်ရပါမယ်။
(1)ရာသီလာပြီးရရက်အတွင်း တားနည်းများမသုံးဘဲ ဆက်ဆံမိသောအခါ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား?
ထိုသို့မေးသောအခါ ondr အနေဖြင့်ရနိုင်ချေရှိပါသည်ဟုပဲဖြေရပါလိမ့်မယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရာသီလာပြီးရရက်အတွင်းမမျိုးဥကြွေရက်မဟုတ်သော်လည်း ရာသီရက်မှန်သူများအဖို့ မရနိုင်ပါဟု သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း ရာသီမမှန်သုများအဖို့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။ထို့ကြောင့် မည်သို့ရက်ရှောင်နည်း ဆိုသော်ငြားလည်း ကိုယ်ဝန်လုံးဝတားချင်သူများအဖို့ အဆိုပါရက်အတွင်းနေခဲ့သော်လည်း တားနည်းတခုခုသုံးမှသာ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
(2)တခါပဲ ခဏလေးအတွင်း အတူဆက်ဆံခဲ့မိသော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
ထိုကဲ့သို့ ခဏလေး တစ်ကြိမ်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး တားနည်းတခုမှ မသုံးမိခဲ့သော် ရာသီလာရက်ကျော်လာသောအခါ ကိုယ်ဝန်အဖြေကို စစ်ရန်ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။အဆိုပါ ခဏတာတကြိမ်အတွင်း ထွက်ခဲ့သောသုတ်ရည်တွင်သုတ်ပိုးပါသောအခါ မမျိုးဥကြွေရက်နှင့်တိုက်ဆိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်သည်ကို ဆင်ခြင်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် တကြိမ်တခါအမှားသည် ကြီးမားသောပြသနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် တကြိမ်လေး တခဏတာလေးကို ယုံစားပုံအပ်ရ်ျမရနိုင်ပါ။
ကွန်ဒုံးသုံးလျှင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ရန် ၁၀၀%နီးပါးကာကွယ်သော်လည်း ကွန်ဒုံးထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ ကျော်လွန်ခြင်း နှင့် ဆက်ဆံစဉ်ပေါက်ပြဲသည်ကိုသတိမပြုမိလျှင်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။ထို့ကြောင့် expired dateနှင့်ပေါက်ပြဲမူရှိမရှိအရည်အသွေးကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
(4)သောက်ဆေး ထိုးဆေးသုံးစွဲခဲ့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား?
တားဆေးကို အတူဆက်ဆံပြီးမှသောက်ခဲ့သော် သို့မဟုတ် မဆက်ဆံခင်တရက်သာ ကြိုတင်သောက်ခဲ့သော်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းမှာ စသောက်သောရက်သည်ရာသီလာပြီး ၅ရက်အတွင်းမဟုတ်ခဲ့သော် ရရက်ရှောင်ရမည်ကိုမသိခဲ့သော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသည်။ထိုးဆေးသည်လည်း အဆိုပါနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အဆိုပါသောက်ဆေး ထိုးဆေးသုံးစွဲနည်းကိုမှန်ကန်စွာလိုက်နာမှသာ အကျိုးရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ကိုတားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးသောက်နည်းမမှန် ရက်မမှန်လျှင် တားနည်းသုံးခဲ့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။
(5)ကလေးမွေးပြီးနောက်ရာသီမလာရ်ျ တားဆေးမသုံးဘဲ ဆက်ဆံမိသော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
ကလေးမွေးပြီးနောက် နို့တိုက်မိခင်များသည်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ရာသီမမှန်တတ်ပါ။ထိုအခါ တားနည်းသုံးရန်မေ့လျော့နေပြီး ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဟုထင်မှတ်ကာ ဆက်ဆံမိတတ်ကြပါတယ်။နို့တိုက်နေသောကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရရန် နည်းသော်လည်း ကာကွယ်မူအပြည့်အဝမရနိုင်ပါ။ကိုယ်ဝန်တားနည်ူမသုံးထားလျှင် ရနိုင်ချေရှိပါသေးသည်ကိုမမေ့ရန်အထူးသတိထားနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ရှေ့ကလေး နောက်ကလေးနီးလျှင်ကလေးရော မိခင်အတွက်ပါအဆင်မပြေနိုငိပါ။ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်အတိုင်းကလေးမွေးပြီး၄၅ရက်ရှောင်ပြီး တားနည်းတခုခုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
(6)သုတ်ရည်အပြင်ထုတ်နည်းသုံးရ်ျ ဆက်ဆံသော် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါလား?
အဆိုပါနည်းကို ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးထင်ရ်ျ သုံးလေ့ရှိသော်လည်း လက်တွေ့မူကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည်ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။သုတ်ရည်သည် မိန်းမကိုယ်ထဲအနည်းငယ်သာဝင်ရုံဖြင့် သုတ်ပိုးများ ပါနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
သုတ်ရည်အပြင်ထုတ်နည်းသည် တထစ်ချကိုယ်ဝန်လုံးဝမရနိုင်ပါဟု ယုံကြည်ရ်ျမရပါ။
(7)အရေးပေါ်ဆေး သောက်ထားသော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား?
အရေးပေါ်ဆေးသည် မတော်တဆမမျှော်လင့်သောဆက်ဆံမူပြုမိမှသာ သောက်သုံးရန်ညွန်ကြားထားသောဆေးဖြစ်သော်လည်း မကြာခဏသုံးစွဲ ခြင်း။အချိန်မှီသောက်သုံးရန် မေ့လျော့ခြင်း။သောက်နည်းမမှန်ကန်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိလနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းအနေအထားမမှန်ကန်ခြင်း။ထည့်နည်းမမှန်ခြင်းစသောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရန်အခွင့်အလမ်းနည်းသော်လည်း ရနိုင်ချေရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်နားလည်းတတ်ကျွမ်းသောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်သာ ထည့်သင့်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် မိမိနှင့်သင့်တော်သောတားနည်းသေချာစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်သုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ရရန် အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုဟအထူးသတိထားဆင်ခြင်ပြုမူနေထိုင်သင့်ကြောင့် လူငယ်လူရွယ်များ သိထားသင့်ပါတယ်။
ဟူသောမေးခှနျးသညျ OnDoctor ရဲ့ပရိသတျ လူငယျမြား အမေးမြားဆုံးမေးခှနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။သဘာဝတရားရဲလှု့ဆျောမူကွောငျ့ အမှားတဈခုနယျကြှံမူကွောငျ့ ထိတျလနျ့တကွားဖွဈနသေူမြားအတှကျ အားကိုးတကွီးမေးခှနျးတဈခုပငျဖွဈပါတယျ။ကိုယျဝနျရနိုငျတယျဟု ယူဆူအဖွပေေးသောအခါ နောကျဆကျတှဲ ရလာလြှငျမလိုခငျြရျြ ကူညီပါဟုလညျးမေးတတျကွပါတယျ။မလိုလားအပျသောအပွုအမူပွုလုပျလြှငျလညျး ဆိုးကြိုးမြားတတျသညျကိုလညျးရှငျးပွသညျကို လကျမခံနိုငျဖွဈတတျကွပါတယျ။မိမိရဲ့ခဈြသူ ပွောစကားကိုယုံစားရျြ အရှကျတကှဲအကြိုးနညျးသောအဖွဈသို့ရောကျမညျကို မိနျးကလေးမြားအထူးသတိထားရှောငျရှားနိုငျရပါမယျ။
(1)ရာသီလာပွီးရရကျအတှငျး တားနညျးမြားမသုံးဘဲ ဆကျဆံမိသောအခါ ကိုယျဝနျရနိုငျသလား?
ထိုသို့မေးသောအခါ ondr အနဖွေငျ့ရနိုငျခရြှေိပါသညျဟုပဲဖွရေပါလိမျ့မယျ။အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ရာသီလာပွီးရရကျအတှငျးမမြိုးဥကွှရေကျမဟုတျသျောလညျး ရာသီရကျမှနျသူမြားအဖို့ မရနိုငျပါဟု သတျမှတျနိုငျသျောလညျး ရာသီမမှနျသုမြားအဖို့ ကိုယျဝနျရနိုငျခရြှေိပါသေးတယျ။ထို့ကွောငျ့ မညျသို့ရကျရှောငျနညျး ဆိုသျောငွားလညျး ကိုယျဝနျလုံးဝတားခငျြသူမြားအဖို့ အဆိုပါရကျအတှငျးနခေဲ့သျောလညျး တားနညျးတခုခုသုံးမှသာ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
(2)တခါပဲ ခဏလေးအတှငျး အတူဆကျဆံခဲ့မိသျော ကိုယျဝနျရနိုငျပါသလား?
ထိုကဲ့သို့ ခဏလေး တဈကွိမျဆကျဆံခဲ့ပွီး တားနညျးတခုမှ မသုံးမိခဲ့သျော ရာသီလာရကျကြျောလာသောအခါ ကိုယျဝနျအဖွကေို စဈရနျဝနျလေးတတျကွပါတယျ။အဆိုပါ ခဏတာတကွိမျအတှငျး ထှကျခဲ့သောသုတျရညျတှငျသုတျပိုးပါသောအခါ မမြိုးဥကွှရေကျနှငျ့တိုကျဆိုငျပွီး အလှယျတကူ ကိုယျဝနျရရှိနိုငျသညျကို ဆငျခွငျသတိပွုသငျ့ပါတယျ။ထို့ကွောငျ့ တကွိမျတခါအမှားသညျ ကွီးမားသောပွသနာတဈရပျဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ထို့ကွောငျ့ တကွိမျလေး တခဏတာလေးကို ယုံစားပုံအပျရျြမရနိုငျပါ။
ကှနျဒုံးသုံးလြှငျ ကိုယျဝနျရနိုငျရနျ ၁၀၀%နီးပါးကာကှယျသျောလညျး ကှနျဒုံးထုတျလုပျသညျ့ရကျစှဲ ကြျောလှနျခွငျး နှငျ့ ဆကျဆံစဉျပေါကျပွဲသညျကိုသတိမပွုမိလြှငျလညျး ကိုယျဝနျရနိုငျခရြှေိပါသေးတယျ။ထို့ကွောငျ့ expired dateနှငျ့ပေါကျပွဲမူရှိမရှိအရညျအသှေးကို သတိပွုသငျ့ပါတယျ။
(4)သောကျဆေး ထိုးဆေးသုံးစှဲခဲ့သျောလညျး ကိုယျဝနျရနိုငျသလား?
တားဆေးကို အတူဆကျဆံပွီးမှသောကျခဲ့သျော သို့မဟုတျ မဆကျဆံခငျတရကျသာ ကွိုတငျသောကျခဲ့သျောကိုယျဝနျရနိုငျပါတယျ။အကွောငျးရငျးမှာ စသောကျသောရကျသညျရာသီလာပွီး ၅ရကျအတှငျးမဟုတျခဲ့သျော ရရကျရှောငျရမညျကိုမသိခဲ့သျော ကိုယျဝနျရနိုငျပါသညျ။ထိုးဆေးသညျလညျး အဆိုပါနညျးအတိုငျးပငျဖွဈပါတယျ။ထို့ကွောငျ့အဆိုပါသောကျဆေး ထိုးဆေးသုံးစှဲနညျးကိုမှနျကနျစှာလိုကျနာမှသာ အကြိုးရှိပွီး ကိုယျဝနျကိုတားဆီးနိုငျမညျဖွဈပါတယျ။ဆေးသောကျနညျးမမှနျ ရကျမမှနျလြှငျ တားနညျးသုံးခဲ့သျောလညျး ကိုယျဝနျရနိုငျပါတယျ။
(5)ကလေးမှေးပွီးနောကျရာသီမလာရျြ တားဆေးမသုံးဘဲ ဆကျဆံမိသျော ကိုယျဝနျရနိုငျပါသလား?
ကလေးမှေးပွီးနောကျ နို့တိုကျမိခငျမြားသညျဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲကွောငျ့ရာသီမမှနျတတျပါ။ထိုအခါ တားနညျးသုံးရနျမလြေ့ော့နပွေီး ကိုယျဝနျမရနိုငျဟုထငျမှတျကာ ဆကျဆံမိတတျကွပါတယျ။နို့တိုကျနသေောကွောငျ့ကိုယျဝနျရရနျ နညျးသျောလညျး ကာကှယျမူအပွညျ့အဝမရနိုငျပါ။ကိုယျဝနျတားနညျူမသုံးထားလြှငျ ရနိုငျခရြှေိပါသေးသညျကိုမမရေ့နျအထူးသတိထားနထေိုငျသငျ့ပါတယျ။ရှကေ့လေး နောကျကလေးနီးလြှငျကလေးရော မိခငျအတှကျပါအဆငျမပွနေိုငိပါ။ထို့ကွောငျ့ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြအတိုငျးကလေးမှေးပွီး၄၅ရကျရှောငျပွီး တားနညျးတခုခုအသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။
(6)သုတျရညျအပွငျထုတျနညျးသုံးရျြ ဆကျဆံသျော ကိုယျဝနျရနိုငျပါလား?
အဆိုပါနညျးကို ကိုယျဝနျမရနိုငျဘူးထငျရျြ သုံးလရှေိ့သျောလညျး လကျတှမေူ့ကိုယျဝနျရနိုငျသညျကို သိရှိရနျလိုအပျပါတယျ။သုတျရညျသညျ မိနျးမကိုယျထဲအနညျးငယျသာဝငျရုံဖွငျ့ သုတျပိုးမြား ပါနိုငျသောကွောငျ့ ကိုယျဝနျရရှိနိုငျပါသေးတယျ။
သုတျရညျအပွငျထုတျနညျးသညျ တထဈခကြိုယျဝနျလုံးဝမရနိုငျပါဟု ယုံကွညျရျြမရပါ။
(7)အရေးပျေါဆေး သောကျထားသျောလညျး ကိုယျဝနျရနိုငျပါသလား?
အရေးပျေါဆေးသညျ မတျောတဆမမြှျောလငျ့သောဆကျဆံမူပွုမိမှသာ သောကျသုံးရနျညှနျကွားထားသောဆေးဖွဈသျောလညျး မကွာခဏသုံးစှဲ ခွငျး။အခြိနျမှီသောကျသုံးရနျ မလြေ့ော့ခွငျး။သောကျနညျးမမှနျကနျခွငျးစသညျတို့ကွောငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျခရြှေိလနိုငျပါတယျ။
ပစ်စညျးအနအေထားမမှနျကနျခွငျး။ထညျ့နညျးမမှနျခွငျးစသောကွောငျ့ ကိုယျဝနျရရနျအခှငျ့အလမျးနညျးသျောလညျး ရနိုငျခရြှေိပါတယျ။ထို့ကွောငျ့နားလညျးတတျကြှမျးသောကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားနှငျ့သာ ထညျ့သငျ့ပါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ မိမိနှငျ့သငျ့တျောသောတားနညျးသခြောစှာကွိုတငျပွငျဆငျသုံးစှဲခွငျးမရှိဘဲလိငျဆကျဆံခွငျးသညျ ကိုယျဝနျရရနျ အခှငျ့အလမျးဖွဈစနေိုငျသညျကိုဟအထူးသတိထားဆငျခွငျပွုမူနထေိုငျသငျ့ကွောငျ့ လူငယျလူရှယျမြား သိထားသငျ့ပါတယျ။
ဖြားနာခွငျးမှသညျ အသကျအန်တရာယျအထိ ဖွဈစနေိုငျသော…